အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း-၂ (CV/ British style) - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း-၂ (CV/ British style)
Posted by AungKoU (UMK) on January 2, 2013 at 10:08 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက် ကြမည့်သူများအားလုံးသည် Curriculum Vitae ကိုမဖြစ်မနေရေးကြရပါမည်။ CV ဆိုသည်မှာမိမိ၏ ပညာရေးနောက်ခံ၊ လုပ်ငန်းနောက်ခံအကြောင်းအရာများကိုလက်ရှိလျှောက်ထားမည့် နေရာ၊ ရာထူးအတွက် ဝေဝေဆာဆာတင်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ CV အပေါ်တွင် မူတည်၍ လုပ်ငန်းရှင်၏ အာရုံကိုဖမ်းစား နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့ပါ၍ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ကြမည့်သူများအတွက် လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် ဝေမျှလိုက်ပါသည်။
Name Pamela Janet Mason
Address 29 Greenlands Avenue, London, SW3 6RF
Telephone 01924786512 Mobile 07799238182
Objective To findarole inafilm or TV production company that will enable me to acquire and develop the skills required foracareer in film or television.
Profile An outgoing and articulate graduate with wok experience in both television and teaching.
2009- MA in Media Studies, Bristol University. Expected 2010
2005 – 2009 BA in Media Studies, with French (2:1) Bristol University
1997 – 2004 Beacon School, London
3 A levels: Drama (A); French (A); German (B)
5 AS levels9GCSEs
October 2007 – June 2008: Language assistant in secondary school in France.Taught English to large classes and small groups.Ranafilm club andaholiday dance and drama club.Assisted with school drama productions.
September 2004 – August 2005: Production assistant at Oordman and Associates Filmmakers, London N16. Performed office and on-set duties.
June – September 2004: Tutor for Jacaranda Drama Workshops. Led groups of teenagers of different backgrounds in dance and drama activities.
July – August 2003: host at Adventure Camping holiday campsite in France. Led the children's club for 4-10 year olds and perform various practical duties on the campsite.
Languages: French – near native speaker fluency (CEF C1); German (B2)
Good keyboard skills. Familiarity with Word, Excel and film editing packages.
Drama, both acting and directing; singing (was member of university choral society).Regular volunteer atalocal center for the homeless.
CV မရေးသားမီမိမိလျှောက်ထားသောနေရာ၊ ရာထူးနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ တိုတိုနှင့် လိုရင်းကိုသာရေးသားဖော်ပြပါ၊ ဖြစ်နိုင်လျင် ၂ မျက်နှာထက် မပိုပါစေနှင့်။ ပကတိအခြေအနေ နှင့် အပြုသဘောဆောင်သောအကြောင်းအရာများကိုသာတင်ပြပါ။ ဖတ်ရှုရာတွင် လွယ်ကူစေရန် အရေးအသားပိုင်းသာမကစာပိုဒ်ဖွဲ့စည်းရာတွင် “အက္ခရာအကြီး၊ စာလုံးအမည်း၊ စာသားများခြားထားခြင်း၊ မျဉ်းသားခြင်းများ” ကိုလိုအပ်သလိုအသုံးပြုပေးပါ။ စာလုံး font များကို“Times New Roman, Arial, Berdana”များကိုသာအသုံးများပြီးစာလုံးဆိုဒ်ကိုအနည်းဆုံး“10” ဖြင့် ရေးသားပါ။
ပထမဦးဆုံးမိမိ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးရပါမည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုရေးသားရာတွင် အချို့သောအချက်အလက်များကိုချန်လှပ်ထားခဲ့ နိုင်ပါသည်။ အသက်၊ ကျား/မ၊ နိုင်ငံသား၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ အိမ်ထောင် ရှိ/ မရှိစသည်များကိုချန်လှပ်ထား နိုင်ပါသည်။
အချို့သောသူများသည် Profile နှင့် Objective တို့ကိုဖော်ပြလေ့ မရှိပါ၊ သို့ရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်ကမိမိအကြောင်းသိနိုင်ရန် ဖော်ပြ ပေးရန်လိုပါသည်။
ပညာအရည်အချင်းကိုရေးသားရာတွင် မိမိ၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေမှ စတင်ကာဖော်ပြ ရပါမည်။ ကျောင်းတက်စဉ် ရရှိခဲ့သောထူးချွန်ဆုများရှိပါကထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါ။ မူလတန်းအဆင့် ပညာရေးအကြောင်းကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။ နိုင်ငံခြားအလုပ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားနှင့် ဆက်စပ်သောအလုပ်များအတွက် ပညာအရည်အချင်းဖော်ပြချက်ကို British ပုံစံနှင့် ဖော်ပြသင့်ပါသည်။ (ဥပမာ -9GCSEs)
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြရာတွင်လည်းနောက်ဆုံးအခြေအနေမှသာစတင် ရေးသားရပါမည်။ သို့မှသာလက်ရှိလျှောက်ထားသောအလုပ်နှင့် နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့သော (သို့မဟုတ်) လုပ်နေဆဲအလုပ် မည်မျှ ဆက်စပ်သည်ကိုလုပ်ငန်းရှင်ကသိရှိ နိုင်ပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွင် တာဝန်၊ ဝတ္တရား (Duties & Responsibility) များကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြ နိုင်ပါသည်။
အတတ်ပညာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကိုရေးသားသောအခါ မိမိတတ်ကျွမ်းသောပညာရပ်များ၊ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောင်မြင်ခဲ့သောစာမေးပွဲများကိုပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါ။
မိမိစိတ်ဝင်စားသည့် အကြောင်းအရာကိုတင်ပြခြင်းသည် မိမိ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတစ်စိတ် တစ်ပိုင်းဖော်ပြရာရောက်သည့် အတွက် တိုတိုနှင့် လိုရင်းကိုသာဖော်ပြပေးပါ။ အထူးသဖြင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဦးစားပေးဖော်ပြသင့်ပါသည်။ မရေရာမပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများ (ဥပမာ-ခရီးသွားခြင်း) စသည်များကိုမဖော်ပြသင့်ပါ။
ရည်ညွှန်းချက်ကိုဖော်ပြရာတွင် မိမိပေးပို့လိုသောသူ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ လိပ်စာများကိုထည့်သွင်းရေးသားနိုင်ပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြမည့် သူများအားလုံးအတွက် လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ် ရေးသားလိုက်ပါသည်။
Phone: (95)9421752568